X-Clusive : माओवादी नेताहरुले युवा स्वरोजगार कोषको करोडौं रकम अझै तिरेनन् - Himalayan Kangaroo
X-Clusive : माओवादी नेताहरुले युवा स्वरोजगार कोषको करोडौं रकम अझै तिरेनन्
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ कार्तिक २०७३, आईतवार १५:१७ |
काठमाडौं । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन एकीकृत माओवादीका नेता डा. वावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा वेरोजार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्येश्यले आफ्नै अध्यक्षतामा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरे । माओवादी सत्तामा आएपछि वेरोगारका लागि यो निक्कै राम्रो र आकर्षक कार्यक्रम पनि थियो । सरकारले विना धितो कोष मार्फत त्यसबेला निक्कै ठूलो रकम बैंक तथा विभिन्न सहकारी मार्पmत लगानी पनि ग¥यो । र, अहिले ८ बर्ष वित्यो त्यसमा ३ अर्बको हाराहारीमा कोष मार्फत लगानी भइसकेको छ भने कोष स्वरोजगार बनाउन अझै प्रयत्नशील छ ।
तर, दुर्भाग्य डा. भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला कार्यविधी बन्नु अघि नै माओवादीका नेताहरु अध्यक्ष रहेको सरकारी संस्थालाई आँखा चिम्लिएर करोडौं रकम लगानी भयोे । पद र पहुँचको आधारमा भएको त्यो राज्यको लगानी अहिले डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । माओवादीकै नेताहरुले लगेको रकम नतिदा अहिले कोषलाई टाउको दुखाई भएको छ । यस्ता रकम लैजाने र नतिर्नेमा माओवादी र एमाले नेताहरुको सहकारी संस्था अग्रस्थानमा छ । र, उनीहरुले नै लगेको रकम अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन । २०६५ सालमा अधिकतम ३ वर्ष ६ महिनाका लागि भनेर बिना धितो नै दिइएको ऋण ८ बर्ष वित्यो अझै उठाउन सकिएको छैन । रकम नतिर्नेहरुलाई कालोसूचिमा राख्ने तयारी भइरहेको कोषले जनाएको छ । माओवादीकै नेता गणेश रेग्मी अध्यक्ष रहेको मजदुर शहीद स्मृति सहकारी र माओवादीकै नेता शालिग्राम जम्मरकट्टेल लगायतले ५ करोड लगेर अझै तिरेका छैनन् ।
संयोग के छ भने त्यतिबेला पनि माओवादी नेतृत्वै कै सरकार थियो र अहिले पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ तर रकम लगेको आठ बर्षसम्म पनि रकम लाग्नेहरुलाई कालोसूचिमा राख्ने हिम्मत समेत कोषले गर्न सकेको छैन ।
कुन नेताले कोषलाई कति रुकम तिर्न बाँकी ?
मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाकौ नाममा ५ करोड रुपैयाँ
माओवादीका नेताहरुको सिफारिसमा युवा स्वरोजगारले आफ्नो कार्यविधि नबन्दै २०६८ साल मंसिर १ गते सम्झौता गरेको हो । र, मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाका नाममा ५ करोड रुपैयाँ कोषले दियो । त्यो रकम सहकारीले विभिन्न व्यक्ति तथा समूहलाई लगानी ग¥यो । लगानी गरिएका ती अधिकांश रकम नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडियो । त्यो ऋण बेरोजगार युवाहरुले उद्यमका लागि पाएनन्, बरु नेताहरुले आफ्नो मर्जीमा चलाए र परिचालन गरे । तर अधिकतम ४२ महिनाको समय सकिएपनि यस सहकारीबाट ऋण लगेका धेरैजसो नेता तथा कार्यकर्ताले ऋण तिरेनन् र अहिले पनि यस सहकारीले युवा स्वरोजगार कोषलाई सावाँ र ब्याज गरी ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
तीनकुनेमा कार्यालय रहेको मजदुर सहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्थाबाट ऋण लैजाने अधिकांश माओवादी पार्टीमा आवद्धहरु नेता तथा कार्यकतारु छन् । अहिले पनि यस सहकारीका अधिकांश ऋणिहरु पार्टीमा कुनै न कुनै जिम्मेवार पदमा छन् ।
उषा देवकोटा र जीवन देवकोटा समूहको नामबाट शालिकराम जमरकट्टेलले १ करोड तिरेनन्
सहकारीबाट सबैभन्दा बढी ऋण लैजाने व्यक्ति अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेल हुन् । जमरकट्टेलले यस सहकारीबाट बंगुरपालनका लागि भन्दै २०६८ साल मंसिर १४ गते उषा देवकोटा र जीवन देवकोटा समूहको नामबाट १ करोड रुपैयाँ लगेका छन् । कोषको नीति अनुसार एउटा समूहमा अधिकतम २५ जनालाई अधिकतम २ लाखका दरले ५० लाखसम्म दिने भएकाले जमरकट्टेलले उषा देवकोटा र जीवन देवकोटाको दुईवटा समूह बनाएर ५० जनाको २ लाखको दरले १ करोड रुपैयाँ लगेका थिए ।
यो समूहमध्ये जीवन देवकोटाको समूहमा शालिकराम आँफै सदस्य बनेका छन् । नाम जो जो को भएपनि बंगुर पालनका लागि लगिएको भनिएको यो पैसा शालिकराम आँफैले चलाएका थिए । जमरकट्टेल समूहले ललितपुरको विशंखुनारायणमा बंगुर पालन पनि गरेको छ । सुरुवाती समयमा यस व्यवसायले राम्रो आम्दानी समेत गरेको थियो । तर जति राम्रो आम्दानी गरेपनि यो समूहले न त सहकारीको पैसा ति¥यो न त कोषले नै पैसा पायो ।
कुनै समय ५ सय बंगुर राखेर व्यवसाय सुरु गरेको फार्ममा अहिले बच्चाहरु जाडेर जम्मा ३६ वटा बंगुर छन् । ठूला बंगुरहरु अत्यन्तै कम छन् । पहिले राम्रो भएपनि धेरै बंगुर मरेकाले घाटा भएको र पैसा तिर्न नसकेको बताउँछिन्, यहाँकी एक कर्मचारी ।
अहिले यस फार्ममा ३६ वटामात्रै बंगुर छ रयी बंगुरहरु पनि अब बिस्तारै हटाउँदै लैजाने बताइएको छ । तर यस फार्मले कमाएको पैसा के गरियो, त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन र बुझाउने पैसा बुझाइउको छैन ।
जगत सिम्खडाले ४५ लाख तिरेनन्
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव समेत रहेका मजदुर नेता जगत सिम्खडाले पनि समूह बनाएर ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लगेका थिए । खाद्यान्न पसल स्थापनाका लागि भन्दै २०६८ मंसिर १२ गते २५ जनाको समूहलाई १ लाख ८० हजारका दरले ४५ लाख रुपैयाँ लगानी गरियो । तर खाद्यान्न पसल चलाइयो कि चलाइएन त्यसको अनुगमन नै भएन । सिम्खडा समूहले त्यो पैसाले नयाँ बसपार्कमा पेट्रोल पम्प भाडामा लिएर चलायो । ३५ लाखमा भाडामा लिइएको उक्त पेट्रोल पम्प १ वर्षअघि ६७ लाखमा बेचियो । तर नाफा खाएर बेचेपनि जगत सिम्खडा समूहले अझै उक्त ऋण चुक्ता गरेको छैन । सुरुमा ऋण लैजाँदा ३ वर्षभित्र सावाँ र ब्याज बुझाउने सहमति भएपनि त्यो रकम अझै तिरिएको छैन ।
बाबुराम गौतमको नाममा ४२ लाख ५० हजार
मजदुर सहीद स्मृति उपभोक्ता सहकारीबाट पैसा लगेर नतिर्ने अर्को समूह बाबुराम गौतमको समूह हो । उनी अहिले माओवादी केन्द्र ओखलढुङ्गाका संयोजक समेत हुन् । गौतमले खेलकुद सामग्रीको थोक तथा खुद्रा विक्रीका लागि भन्दै २५ जनाको समूह बनाएर १ लाख ७० हजारका दरले ४२ लाख ५० हजार रकम लगेका थिए । अन्य व्यवसाय डुब्ने भएपनि खेलकुद सामग्रीको ब्यापारमा नाफा मात्रै हुनुपर्ने हो । तर उनले त्यसको ब्यापारबाट भएको नाफा कहाँ लगे पत्तो छैन । सहकारीलाई तिर्नुपर्ने रकम उनले अहिलेसम्म तिरेका छैनन्, जुन युवा तथा साना उद्यमी स्वरोजगार कोषको रकम हो ।
टीकाराम प्रसाईले ३० लाख तिरेनन्
ठूलो रकम ऋण लगेर नतिर्ने अर्को समूह टीकाराम प्रसाईको हो र उनी पनि माओवादीसम्बद्ध हुन् । उनले छाला जुत्ता कारखाना स्थापनाको लागि भन्दै १५ जनाको समूह बनाएर २ लाखका दरले ३० लाख ऋण लगेका थिए । तर उनले छाला जुत्ता कारखाना कहाँ सञ्चालन गरे, त्यसबाट कति आम्दानी र नाफा भयो थाहा छैन । उनले पनि अहिलेसमम ऋण लगेको मजदुर सहीद स्मृति सहकारीलाई ऋण तिरेका छैनन् ।
पीताम्बर गिरीले २५ लाख ८० हजार तिर्न बाँकी
यस सहकारीबाट ऋण लैजाने अर्को समूह पिताम्बर गिरीको समूह हो । यस समूहले जुत्ता तथा चप्पल उत्पादनका लागि भन्दै २२ जनाको समूह बनाएर १ लाख ६० हजारका दरले ऋण लगेका थिए । उनले सुकेधारामा जुत्ता कारखाना पनि सञ्चालन गरेका छन् र त्यसबाट राम्रै आम्दानी नि भएको छ । तर उनले सहकारीबाट लिएको युवा र स्वरोजगार कोषको ऋण तिर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन् ।
कुमार पन्तले ३० लाख तिरेनन्
मजदुर सहीद स्मृति सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने अर्को समूह कुमारप्रसाद पन्तको समूह हो ।यस समूहले खाद्य सामग्रीको थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने भनेर २५ जनाको समूह बनाई प्रतिव्यक्ति १ लाख २० हजारका दरले ३० लाख रुपैयाँ ऋण लगेको थियो । तर उनले लगेको ऋण अझै तिरिएको छैन । उनको खाद्य सामग्रीको पसल कहाँ पुग्यो त्यो पनि पत्तो छैन ।
धनबहादुर विकले २४ लाख ७० हजार तिर्नुपर्ने
खाद्यान्न सामग्रीकै थोक तथा खुद्रा व्यापारका लागि भन्दै ऋण लैजाने अर्को समूह धन बहादुर विकको समूह हो । उक्त समूहले सहकारीबाट २४ लाख ७० हजार रुपैयाँ ऋण लगेको थियो । तर यस समूहले अहिलेसम्म ऋण तिरेको छैन ।
यस सहकारीबाट ऋण लिने अन्य समूहहरुमा कृष्ण अधिकारी समूहले बंगुरपालनका लागि १० लाख ८० हजार, बंगुरपालनकै लागि आइन्द्र सुब्बा समूहले ५ लाख ५० हजार, गड्यौला मल उत्पादनका नाममा वैद्यनाथकुमार झा समूहले ५ लाख ऋण लगेका थिए । त्यसैगरी अर्गानिक बेसार खेतीका नाममा बद्री विक्रम आले समूहले १० लाख २० हजार, बंगुरपालनकै नाममा भूपाल सापकोटा समूहले ९ लाख, ड्राई क्लिनर्स स्थापनाका नाममा केशव रेग्मी समूहले ६ लाख ५० हजार, खाद्य सामग्रीको विक्री वितरणका लागि भन्दै भूम बहादुर रेग्मी समूहले १७ लाख ६० हजार र गाइपालनका लागि भन्दै राजन तिमिल्सिना समूहले १६ लाख ऋण लगेर तिरेका छैनन ।
तर ५ करोड रुपैयाँ बाँडेपनि अहिले ऋण नउठेर युवा स्वरोजगारको पैसा जोखिममा परेको छ । युवा स्वरोजगार कोषबाट शुरुमा माओवादीकै नेताहरुको अग्रसरतामा लगिएको ५ करोड अहिले जोखिममा परेको छ । माओवादकै नेता तथा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुले सन्चालन गरेको सहकारी पनि अप्ठ्रोमा परेको छ । भने कोषको रकम डुब्ने जोखिम बढेको छ ।
स्रोत : न्यूज २४ टेलिभिजनको पावर न्यूज
Previousन्यूजिल्याण्डमा ७.४ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प
Nextनेपाली बालबालिकाहरुको सहयोगार्थ मेलबर्नमा ‘अष्ट्रेलियन च्यारिटी’ कार्यक्रम
१९ चैत्र २०७४, सोमबार ०२:११
४ कार्तिक २०७४, शनिबार ०१:४६
चीनले चक्रपथ पूरै आठ लेन बनाइदिने
२१ माघ २०७४, आईतवार ०२:१२